Xildhibaanno is-hortaag ku sameeyay kulanka Baarlamaanka Puntland oo lagula xisaabtami lahaa Xukuumadda – Kalfadhi
Xildhibaanno is-hortaag ku sameeyay kulanka Baarlamaanka Puntland oo lagula xisaabtami lahaa Xukuumadda
November 30, 2020 Hassan Istiila
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada DPL Mudane Gudoomiye Abdirashid Yusuf Jibril oo ay wehliyaan, ku-xigeenka 1-aad Hon. Abdiaziz Abdullahi Osman iyo ku-xigeenka 2-aad Mudane, Ismaaciil Maxamed Warsame, ayaa shir-guddoominyay kulankii 19-aad ee Kalfadhiga 47-aad ee Baarlamaanka, kaas oo maanta u baaqday buuq iyo is-hortaag.
Fadhiga ayaa ajandihiisa waxaa uu ahaa la-xisaabtanka Golaha Xukumadda, waxaana joogay Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta, Horumarinta Dhaqaalaha Iyo Iskaashiga caalamiga ah Mudane, Cabdiqafaar Cilmi Xaange.
Guddoomiyaha Golaha Wakiillada Dawladda Puntland Mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa hakiyey fadhiga, kaddib markii kulanka ay is-hortaag ku sameeyeen 5 Mudane habsami u socodkii Shaqada Golaha.
Mudane Cabdirashiid, ayaa hakinta kulanka u cuskaday Qodobka 8-aad farqada 6-aad ee xeer-hoosaadka Golaha Wakiilada.
Baarlamaanka Puntland ayaa maalmo ka hor ka doodi lahaa heshiiska Puntland iyo P&O Port ( DP-World) ee Dekadda Boosaaso, balse Baarlamaanka ayaa loo gudbiyay codsi ka yimid Madaxweyne Siciid Denni, kaas oo ahaa inay socoto dhammeystirka heshiiska Puntland iyo P&O Port ( DP-World) ee Dekadda Boosaaso, isla markaana loo daayo Golaha Xukumadda.
Jeesow “Xildhibaannada ma ahan arday meel ugu xareysan Guddoomiyaha Baarlamaanka”
Xildhibaannada Baarlamaanka Puntland oo kulamo kula yeelanaya magaalada Lusaka xildhibaannada dalka Zambia
Guddoomiyaha Guddiga Shuruucda & Caddaaladda Golaha Wakiillada Dawladda Puntland xildhibaan Sharmaarke Cali Cilmi ayaa shir-guddoomiyay kulan...